Translations < Myanmar (Burmese) < Baris < GlotPress — WordPress
Translation of Baris: Myanmar (Burmese)
Filter ↓ • Sort ↓ • All (53) • Untranslated (30) • Waiting (0) • Fuzzy (0) • Warnings (0)
Sorry, but nothing matched your search criteria. Please try again with some different keywords. စိတ်မကောင်းပါ သင့် ရှာဖွမေှု စကားလုံးများနှင့် ကိုက်ညီသည်ကို မတွေ့ပါ။ အခြား သောချက်စကားလုံးများကို သုံးပြီး ပြန်ကြိုးစားကြည့်ပါ။	 Details
Page %s စာမျက်နှာ %s	 Details
View all posts by %s %s ရေးသော စာမူအားလုံးကို ကြည့်ရန်	 Details
%s ရေးသော စာမူအားလုံးကို ကြည့်ရန်
<span class="%1$s">Posted on</span> %2$s <span class="meta-sep">by</span> %3$s %2$s တွင် %3$s<span class="meta-sep">က</span> <span class="%1$s">ေရးသားခဲ့သည်။</span>	 Details
%2$s တွင် %3$s<span class="meta-sep">က</span> <span class="%1$s">ေရးသားခဲ့သည်။</span>
(Edit) (ပြုပြင်) Details
Pingback: ချိတ်ဆက်မှု သတင်းပို့ချက် :	 Details
ချိတ်ဆက်မှု သတင်းပို့ချက် :